Waa maxay fursadaha ugu fiican ee dib loogu soo celin karo goobtaada?
Iyadoo mashiinka search engine algorithms isbedel waqti, waxay sidoo kale keentaa isbeddel ku yimaada siyaabaha labadaba on- iyo bogga dib u-eegista. Raadinta mashiinka raadinta ayaa noqon doonta mid aad u adag oo mustaqbalka ah sababtoo ah tartanka tartanka ee kobcinta suuq geynta. Iyadoo ay weheliso isbeddel ku yimaada algorithms, dabeecadaha isticmaalayaasha raadinta waxay u muuqdaan kuwo isbeddelaya, samaynta barxada dijitaal xitaa tartan badan, gaar ahaan marka ay timaado xidhiidhinta jiilka. Dhamaan darsameyaashu waxay fahmaan qiimaha dhabta ah ee dhabarka ah ee ilo kasta oo shabakad ah oo ay ku dadaalaan sidii ay u iibsan lahaayeen. Inkastoo helitaanka tayo sare leh, xidhiidhada dibadda ee la xidhiidha boggagaaga waa MUST loogu talogalay horumarinta muuqaalka ganacsigaaga; shaqadu way sahlan tahay marka la barbar dhigo. Maqaalkani, waxaan ka wada hadli doonaa farsamooyinka cusub ee muhiimka ah sida loo helo dib-u-eegis tayo leh oo ka socda goobaha PR-da oo aad hagaajisid darajada bogga natiijada raadinta.
Sidee dib ugu heleysaa boggaaga?
Fiiri qoraalkaaga calaamadinta
Waa mid ka mid ah farsamooyinka dhismaha ee ugu qiimaha badan oo ugu fudud ee aad isticmaali karto marka markaa aad leedahay sumcad aad u saraysa oo ku taal naaskaaga ama dhawaan waxay sameeyeen dib u habayn. Xiriirkani xiriirka fudud ee fudud wuxuu kaa caawinayaa inaad hesho tayo badan, iyo waxa aad u muhiim ah, xiriirka dibadda ee ku xiran boggagaaga. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad qeexdid calaamadaha aan la isku haleynin ee ku qoran astaantaada iyo waydiiso qoraallada erayadaas si aad uhesho xiriirin goobtaada. Waxaad fududeyn kartaa habka aad u raadinayso wixii ku saabsan tusmadaada adoo isticmaalaya qalabkan xirfadlaha ah sida Sahanka Website Seddexaad, Google Raadinta, Warqadaha Google, iwm.Si aad u ogaato markasta oo magacaaga caanka ah lagu soo sheego, waxaad u baahan tahay inaad sameysatid email ama wargelin browser ah.
Sii wadashaqeynadaada ganacsiga markhaati furan adoo isku bedelaya link
Hab kale oo wax ku ool ah sida aad u hagaajin karto muuqaalkaaga astaantaada iyo sare u qaadista taxanahaaga SERP Google waa adigoo bixinaya marqaatiyada in goobo kale oo lagu beddelo xiriirka ay ku leeyihiin goobtaada. Farsamada dhismaha farsamadani waxay kaa caawineysaa inaad ku dhejiso meelo badan oo dibadda ah si aad u hesho shirkado caan ah oo aad magacaaga ku dhejiso boggooda. Bixinta marqaatiyaadka bogagga shabakadda ee lagu soo bandhigay suuq-geynta suuqa waxay u badan tahay inay sababaan xiriirro dib ugu noqoshada goobtaada.
Ku soo dhawow wareegtooyinka xiriirka
Xirfadaha isku xirka ayaa ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ee ay sameeyeen bloggers iyo daabacaadaha warshadaha kuwaas oo daabacaan daabacadooda si joogto ah. Isu-duwaha fidiyeyaasha xiriiriya ayaa si joogta ah u raadinaya waxyaabo waaweyn oo waxtar leh oo ay ku jiraan liiska. Waa arrin dhib badan in la abuuro isku xirnaanta xidhiidhada gudaha suuqa xorta ah sida aad ugu baahan tahay inaad sii wadato raadinta waxyaabaha qiimaha leh ee webka. Waxaa intaa dheer, waxaa jira khatar ah in dadka soo booqda xawaaraha isku xirka aysan soo laaban karin. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku siin kartid waxqabad leh oo ku haboon, fursadaha ay ku soo noqdaan ayaa kor u kacaya. Si loola xiriiro dadka curyaamiinta ah waxay u shaqeeyaan si la mid ah ololayaasha kale ee waxqabadka. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad hesho macluumaadka xiriirka ee bixiyeyaasha xiriiriya oo u soo dir email ku habboon soo jeedinta. YouTube
Ku dheji YouTube-ka
YouTube waa barnaamij saxaafadeed oo heer sare ah oo lagu abuurayo taraafikada goobtaada. Qaar ka mid ah qaar ka mid ah niches gaar ah ayaa ka dhigan kara habka dhismaha this link. Kuwaas waxaa ka mid ah farsamada, ciyaaraha, waxbarashada, sayniska, iyo madadaalada. Faa'iidada ugu weyn ee dhismaha isku xirnaanta boggan waa barta casriga ah ee fiidiyowga ah ay rabaan inay helaan sida ugu badan ee blogger ah oo doonaya taraafikada boggiisa. Waxaad abuuri kartaa xiriiro faa'iido leh oo leh sawirrada fiidiyowga si aad uga hesho taraafikada YouTube. Tusaale ahaan, waxaad ku xiran kartaa fiidiyowgooda boostadaada, iyo beddelka, waxaad ku dhejin lahayd fiidiyowgooda boostada blogka Source .